Fifandirana amin'ny governemanta :: Hampitovy tadin-dokanga ireo solombavambahoaka • AoRaha
Fifandirana amin’ny governemanta Hampitovy tadin-dokanga ireo solombavambahoaka
Mihelohelo eny amin’ny Antenimierampirenena indray ny fikasan’ireo depiote hiroso amin’ny fandravana ny governemanta. Re tsilian-tsofina ny fahavononan’ireo olom-boafidy tsy mitovy fironana saingy « hampitovy tadin-dokanga hahatongavana amin’ny fanovana ny governemanta ». Niseho lany ny tsy fitoviana fomba fijery teo amin’ny fahefana mpanatanteraka sy ny Antenimierampirenena tato ho ato, ka izao mampihenjan-droa ny tady eo amin’ny roa tonta izao.
Nambaran’ny olomboafidy mpanohitra iray mihitsy fa « tsy vao izao no nisian’io resaka io saingy ny fampiharana azy no tsy nety tanteraka ». Vitan’ny resaka mangina any ambadika any aloha, raha ny noresahan’ny loranom-baovao iray omaly ity vinavina hanozongozona ny governemanta ity.
« Tsy mbola misy izany fiarahana na ny fifanarahana tapaka eo amin’ny solombavambahoaka mpanohana sy mpanohitra ny fitondrana izany. Raha politika anefa no resahana, fantatsika fa rehefa misy ny tombontsoa iombonana dia tsy azo ailika ny mety hisian’ny fifanatonana eo amin’ny roa tonta. Tsy misy hoe mpanohitra sy ny mpanohana hiady sy hifanandrina mandrakizay izany », hoy fotsiny ny filohan’ny Antenimierampirenena, Christine Razanamahasoa tamin’ny antso an-tariby, omaly.
Tsy mety levon’ny vavonin’ny ankamaroan’ireo depiote ny faritan’izy ireo ho « endrika fanaovan’ireo minisitra sasany tsinontsinona azy ireo amin’ny fangatahana an’ireo tombontsoany manokana ireo, toy ny fiara tsy mataho-dalana ».
Fiaraha-miasa tsy milamina
«Tsy milamina ny fiaraha-miasa ary betsaka ireo fitarainana ifampiresahanay samy depiote. Tsy ny mpanohitra ihany fa na ireo mpanohana ny fitondrana, eny hatramin’ireo avy amin’ ny hery afovoany. Manginy fotsiny ireo famatsiam-bola amin’ny fotodrafitrasa hatao eny amin’ny fari-piadidiampifidianana nahalany anay ary efa voafaritra ao anatin’ny teti-bolam-panjakana, saingy tsy mety tonga aty aminay hatramin’izao », hoy indray ny depiote Liantsoa Andriamanjato avy amin’ny Tim.
Vao nohamafisin’ny tsy fitovian-kevitra momba ny fanatontosana ny fifanatrehan’ireto andrim-panjakana roa ireto, mandritra an’izao fivoriana ara-potoanan’ny Antenimiera izao, io fifandirana io. Manantena ny hifanatrika ara-batana amin’ny governemanta ny ankamaroan’ny solombavambahoaka.
Mametraka ny laharampahamehana amin’ny sehatra hafa kosa anefa ireo mpikambana sasany ao amin’ny governemanta. « Ny ady amin’ny valanaretina aloha izao no tena imasoana mba hanafaka antsika ao anatin’ny fihibohana », hoy ny minisitra iray, omaly.
Tsaroana hatrany kosa ny fanambaràn’ny Praiminisitra Ntsay Christian, tamin’ ny alahady alina lasa teo, izay nilazany fa « malalaka amin’ny fanapahan-kevitra raisiny momba ny fanovana na fandravana ny governemanta ny Filohan’ny Repoblika, ary tsy midongy toerana izy ».